Community & Society » M C R B’ Tourism Sector-wide Impact Assessment	10
Myanmar Centre for Responsible Business’ Tourism Sector-wide Impact Assessment စိတ်ဝင်စားလို့ ဖတ်ချင်သူများ ရှိခဲ့ရင် ပေါ့
With apologies for any cross posting, I have pleasure in enclosing links to Myanmar Centre for Responsible Business’ Tourism Sector-wide Impact Assessment which was published on Friday and which you might have seen reference to on page 1 of Saturday’s New Light of Myanmar. I have cut/pasted the English language press release beneath my address below to give you some background to the report, The Exec Summary, and the full report, in English, are available for download from our website.
2. The SWIA is based on both desk-based and field-based research in six locations throughout the country which have already experienced tourism development. It includes an in-depth analysis of existing Myanmar legal frameworks and the legal and policy framework relevant to the tourism sector. The report also providesabackground on the tourism sector in Myanmar, including the tourism value chain and sector-wide impacts tourism businesses and other actors have to manage. 3. The SWIA draws on established environmental and social impact assessment methodologies, but appliesahuman rights lens. The Tourism SWIA and its methodology were developed in collaboration with MCRB’s founding organisations, the Danish Institute for Human Rights (DIHR) and Institute for Human Rights and Business (IHRB). In September 2014aSWIA on Myanmar’s Oil and Gas sector was launched and future SWIAs on ICT and Agriculture are currently being underway.
6. A summary of the recommendations to each of the main actors in Myanmar’s Tourism sector is included in Annex below. The full set of these recommendations and suggestions for how they can be implemented are included in the full report (Part 5). CREDIT TO :
သူ့စာထဲ မှာ ပါတဲ့ Executive Summary and Recommendations (English) (576 KB)
ကတော့ Link expired! ဆို ပြနေလို့ link မထည့်ပေးတော့ပါ ။
အဲဒီ့ အင်္ဂလိပ်လို မှ ဖတ်ချင်ရင်တော့ သူ့ဆီ စာရေး မေး ရင် ရနိုင်မည် ထင်ပါကြောင်း။
has written 106 post in this Website..
Mr. MarGa says: ခေါင်းနည်းနည်းမူးသွားပီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7169
Mike says: .ကထူးဆန်းနှယ်..တခါထဲဘာသာပြန်လိုက်ပီးရော Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
အလင်းဆက် says: ဂူးဂဲထဲမှာ ဒီစာတွေကို ပြူးပြဲပြီး ဘာသာပြန်ကြည့်သေးတယ်..
တလွဲတွေပဲ..ပေါ်လာလို့…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2706
ကထူးဆန်း says: Executive summary and recommendation(Myanmar)
အဲ့ဒီ့ နှစ်ခု က မြန်မာလို လေ .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ကိုယ်တိုင်တော့ မဖတ်နိုင်ဘူး။
သူများဖတ်ဖို့ ရှဲပေးလိုက်ပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14409
kai says: Vicky Bowman ဆိုတာ.. အရင်သံအမတ်လုပ်သွားပြီး.. ကိုထိန်လင်းနဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့တယောက်မဟုတ်လား…။
သူဆိုရင်တော့.. မြန်မာအကြောင်းတော်တော်သိပြီး.. သူ့အကြံပေးကို တန်ဖိုးထားသင့်တယ်…။
ဖြစ်နိုင်ရင်.. ဒီချုပ်က.. အကြံပေးခန့်သင့်တယ်..။
မြစပဲရိုး says: အတော်လေး အဆင့်ရှိပြီး သက်ဆိုင်သူများ လေးစား လိုက်နာ ရမဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်ချက် များပါဘဲ ကထူးဆန်းရှင့်။
မျှပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။အရမ်း တန်ဖိုးကြီးပါတယ်။
pdf ကို သိမ်းထားပါတယ်။
အားချိန်ကျရင် နောက်တစ်ခေါက် အသေအချာ ပြန်ဖတ်ပြီး အတုခိုး စရာများကို သင်ကြားလေ့လာ ပါဦးမည်။
အထိဆုံး ကတော့ မြေသိမ်းပြီး ဟိုတယ်ဇုံ တွေ လုပ်တာ ကို ထောက်ပြတာ ကတော့ အစိုးရမင်းများ အရှိုက် ကို တဲ့တဲ့ကြီး ထိတာပါဘဲ။
ရူးချင်ယောင် ဆောင် နေမဲ့ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးလူကောင်း များ ကိုလဲ ပြေးမြင်ပါတယ်။
သူကြီးမင်း အတွက် ကိုတော့ စာမျက်နှာ ၃၄ ရဲ့ စာပိုဒ် (၃) မှာ တွေ့ထားပါတယ်။
စန္ဒာပြ ကန့်ကွက် နိုင်ဖို့ သတင်းပို့ပါတယ်။ :)))))))))))))))))
kai says: အင်္ဂလိပ်မှာနေတဲ့.. အင်္ဂလန်တွေက.. တမင်တကာကို.. အမေရိကားကို.. အမေရိကန်ဆိုပြီးလုပ်ကြတယ်လို့တောင်ထင်မိတယ်..။
Burman ကိုလည်း.. Burmese လုပ်တတ်ကြ…
မြစပဲရိုး says: လိပ်လိပ် ၊ လန်လန် ..
No ဂရု တော်ကြာ သူကြီးမင်း အားပါးတရ မျိုးချစ်စိတ် ပြင်းလိုက် မှ လူမျိုး နိုင်ငံ တွေ နောက် မယ် နောက်ထပ် ( ) တစ်ခု ထပ်တိုး လာဦးမယ်။
လုံမလေးမွန်မွန် says: Just saved it. :-)
I will come back if I understand after reading it. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.